Usoro ntinye ugwo maka ugwo nke kaadi IC
Nkebi nke 1 ： Ihe omume ozigbo 1. Akụkụ Akụkụ lọjistik bụ nnukwu sistemụ nchịkwa. Ijikwa ike eletrik n’ime ụlọ ọrụ, ụlọ obibi na ụlọ bụ akụkụ dị mkpa na ya. Na-ezu ohi eletrik, na-a electricityụ ọkụ eletrik, na oke eletrik na ụlọ ọrụ, ụlọ obibi, ndị…
Atụmanya ọdịnihu nke mita eletrik eletrik
Site na mmepe ngwa ngwa nke ọha mmadụ, enwetara ngwaahịa a na-akpọ elekere eletrik eletrik, nke na-abụghị naanị na-ebelata ụgwọ ọkụ eletrik nke ndị ọrụ na mpaghara ụfọdụ, kamakwa ọ na-enye mma maka sistemụ ike ma n'otu oge ahụ na-echebe nchekwa ike. Mgbe ahụ, gịnị bụ ...
ike oriri nlekota “nlekọta ụlọ”
Ugbu a ụlọ ọrụ na-anwale ụzọ dị iche iche iji bulie ike ha ma belata ụgwọ nrụpụta. Dịka ọmụmaatụ, njikwa ike ọdịnala na-eji ụzọ ntuziaka iji detuo ma dozie, nke nwere nsogbu dịka nkwụsi ike na-adịghị mma, oge na-adịghị ala, na ihe isi ike. Kedụ ka ọ ga - esi dị adị ...